Tammy Abraham oo rikoodh cajiib ah ku garaacay xiddigaha Cristiano Ronaldo, Kane, Rashford iyo Martial – Gool FM
(London) 03 Nof 2019. Xiddiga reer England iyo kooxda Chelsea ee Tammy Abraham ayaa wuxuu xilli ciyaareed fiican ku qaadanayaa garoonka Stamford Bridge, kaddib imaatinta tababare Frank Lampard.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu soo bandhigay goolasha uu dhaliyay da’ayarka reer England ee Tammy Abraham, tan iyo markii uu bilaabay inuu ka mid noqdo kooxaha heerka koowaad.
Wargeyska ayaa sheegay in Tammy Abraham uu noqday 22 jir, 2-da bishii October ee lasoo dhaafay, wuxuu ilaa iyo haatan dhaliyay 69 gool, isagoo rikoorkan ku garaacay xiddigo badan goolasha uu ku dhaliyay da’adan, waxaana ka mid ah Cristiano Ronaldo.
Tammy Abraham oo 22 jir ah ayaa goolasha uu da’adan ku dhaliyay wuxuu ku garaacay dhamaan xiddigaha kala ah Harry Kane (52), Marcus Rashford (52), Anthony Martial (48) iyo Cristiano Ronaldo (47).
Xilli ciyaareedkan Tammy Abraham ayaa wuxuu dhaliyay 9 gool 11 kulan oo horyaalka Premier League uu u ciyaaray kooxda Chelsea, wuxuuna goolashan kala siman yahay Jamie Vardy (Leicester City) iyo Sergio Aguero (Manchester City).
Si kastaba ha noqotee, Maamulka Chelsea ayaa waxay isha ku hayaan inay cusbooneysiiyaan heshiiska weeraryahankooda Tammy Abraham kaasoo dhacaya xagaaga 2022, waxaana sidaaas shaacisay shabakada “Sky Sports” ee dalka England.
Shabakada “Sky Sports” ayaa waxay sidoo kale intaas sii raacisay in saraakiisha Chelsea ay u soo bandhigeen Abraham dalab cusub si uu qandaraaska ugu kordhiyo, isagoo toddobaadkii mushaar ahaan u qaadan doono qiimo dhan 100,000 ginni.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in ciyaaryahanka uu ogolaan doono inuu cusbooneysiiyo qandaraaskiisa kooxda Chelsea, maadaama uu dareensan yahay in meesha uu horumarka ku gaari karo ay tahay Blues iyo la shaqeynta tababare Frank Lampard.